ကျွန်ုပ်တို့အတွက် "အခမဲ့" သူလျှိုကင်မရာတည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်း (၃) ခု | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
အခမဲ့သူလျှိုကင်မရာတည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်း (၃) ခု
Joaquín Garcia က Cobo | | Raspberry Pi
သတင်းအချက်အလက်သည်အာဏာရှိသောကမ္ဘာတွင်သတင်းအချက်အလက်အချို့နှင့်အတူရုပ်ပုံများ၊ စာများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဖမ်းယူနိုင်ခြင်းသည်လိုအပ်ချက်တစ်ခုအတွက်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သတိရဖို့ရှိသည် အချို့ဒေသများအတွက်၊ သူလျှိုကင်မရာသည်တရားမ ၀ င်ပါ။ အားလုံးမဟုတ်ပါ။ များစွာသောလူများအတွက်၊ သူလျှိုကင်မရာသည်လျှို့ဝှက်ဗွီဒီယိုကင်မရာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးသူတို့၏ဘာသာရပ်များသည်၎င်းကိရိယာရှိကြောင်းသတိမထားမိကြပါ။ ဒီအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအခန်းထဲရှိကင်မရာများ၏ကြေငြာချက်ကိုစောင့်ကြည့်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်သူလျှိုကင်မရာကိုသုံးနိုင်သည်။
ညတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ကိုထူးဆန်းသောသို့မဟုတ်မလိုလားအပ်သော visitors ည့်သည်များလာရောက်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျောက်ဖြစ်လိုသောအချို့သောစစ်ဆင်ရေးများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုနိုင်ရုံသာမကကင်မရာကိုမဖုံးထားပါကပြုလုပ်သည်ထက် ထိုသို့ပြောနေစရာမလိုပါဘူး အချို့သောပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအပေါ်သူလျှိုကင်မရာများနှင့်အတူဝှက်ထားသောကင်မရာများပျော်စရာဖြစ်ကြသည် နှင့်ကျယ်ပြန့် YouTube အသုံးပြုသူများကအသုံးပြုခဲ့သည်။
အခြားစီမံကိန်းများနှင့် gadgets များကဲ့သို့ မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုအခမဲ့ hardware နှင့်သူလျှိုကင်မရာတည်ဆောက်နိုင်သည်အခြားကိရိယာများပါသည့်သူလျှိုကင်မရာတစ်လုံးကိုလည်းဖန်တီးနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိရိယာများအားပြန်လည် အသုံးချ၍ ဒုတိယဘဝကိုပေးနိူင်သည်။ ထို့နောက်ငါတို့သွားသည် သူလျှိုကင်မရာတည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်း (၃) ခုအကြောင်းပြောရန်.
1 အခမဲ့ hardware လိုအပ်သလား။
2 ၁။ ကင်မရာအသုံးပြုခြင်း
4 ၃။ PiCam ကိုသုံးခြင်း
5 ပြီးတော့၊ မင်း၊ သူလျှိုကင်မရာဆောက်ဖို့ဘယ်စီမံကိန်းကိုရွေးသလဲ။
အခမဲ့ hardware လိုအပ်သလား။
အသုံးပြုသူများစွာသည်ဤလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောသူလျှိုကင်မရာသို့မဟုတ် gadget ကိုရှာဖွေပြီးရှာဖွေကြသည်။ သို့သော် သူလျှိုကင်မရာဟာဟာ့ဒ်ဝဲတွေနဲ့လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့လည်းဆော့ဗ်ဝဲလိုအပ်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သုံးပါလိမ့်မည် iSpyအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်တစ်ခုကို Gnu / Linux ဖြန့်ဝေမှုတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်နိုင်သည်။ Android ကိုသုံးရင် iCamSpy လို့ခေါ်တဲ့ app တစ်ခုကိုသုံးမယ်။
ဒီပရိုဂရမ်တွေဟာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်၊ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ပုံတွေကိုဖမ်းဖို့သာမကဆော့ဖ်ဝဲကိုအဝေးကနေထိန်းချုပ်ဖို့၊ စက်ကိုဖွင့်ဖို့၊ ပိတ်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုအခြားကိရိယာတစ်ခုသို့ပို့ဖို့ခွင့်ပြုရုံသာမက သို့သော်ဤပရိုဂရမ်များသည်တစ်ခုတည်းသောအစီအစဉ်များမဟုတ်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ အင်တာနက်နှင့်စတိုးဆိုင်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလားတူပရိုဂရမ်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်သို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်များကိုမပေးနိုင်ပါ.
စျေးကွက်တွင်ကွန်ပြူတာ၊ လက်ပ်တော့တစ်ခုသို့မဟုတ် Raspberry Pi နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သော webcams သို့မဟုတ် camcorder အမြောက်အမြားရှိသည်။ Gnu / Linux ၏အောင်မြင်မှုနှင့် Open Source ဒsuccessနသည်အောင်မြင်ခဲ့သည် ထို webcams အများစုသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီး Raspberry Pi နှင့်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သောလုံးဝအခမဲ့ယာဉ်မောင်းများရှိသည် နှင့်အခြား operating system များနှင့်အတူ။ FSF ဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် စာရင်းတစ်ခု စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းမပါဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲအားလုံးနှင့်အတူ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဒေတာဘေ့စ်ရှိ webcam ကိုရှာလိမ့်မည်။
အခုငါတို့နေရာချရမယ် ဝက်ဘ်ကင်မရာသည်ဗျူဟာမြောက်သောနေရာတွင်မြင်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ တည်နေရာကိုတွေ့ပြီ၊ ငါတို့သုံးမည် ကွန်ပျူတာ၊ Arduino Bluetooth board သို့မဟုတ် Raspberry Pi Zero သို့ချိတ်ဆက်ရန် Webcam မှ usb cable ကို။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည် Raspberry Pi Zero ကိုအသုံးပြုလိုသည်။ ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သော SBC ဘုတ်ဖြစ်သောကြောင့်သူလျှိုကင်မရာကိုစာအုပ်ပုံစံ eReader အိတ်ထဲတွင်နေရာချထားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဤစီမံကိန်း၏ဆိုးကျိုးများမှာကင်မရာအရွယ်ဖြစ်သည်၊ အများအားဖြင့်၎င်းသည်သူလျှိုကင်မရာ၏တည်နေရာနှင့်မကိုက်ညီသောအရွယ်အစား။ ၎င်း၏အပြုသဘောဆောင်သည့်အချက်မှာ၎င်း၏စျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤစီမံကိန်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်မမြင့်မားပါ။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် webcam အဟောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုလျှင်သို့မဟုတ် webcam ၏ resolution ကိုဂရုမစိုက်ပါကများသောအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်သုညဖြစ်သည်။
La စမတ်ဖုန်းပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း ဒါကငါတို့ထင်တာထက်ပိုပြီးတွေ့နေကျအရာတစ်ခုပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းများထုတ်လုပ်ရန်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့သည် ငွေနည်းနည်းလေးနဲ့စမတ်ဖုန်းဟောင်းကိုငါတို့ရှာနိုင်တယ်.
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင့်ထဲသို့သူလျှိုကင်မရာ၏ပြယုဂ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေ။ အုတ်၊ သေတ္တာတစ်ခုသို့မဟုတ်စီးကရက်တစ်ဘူးကဲ့သို့သောစီးကရက်အစုတစ်ခုနှင့်တူသောအမှန်တကယ်နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သောရှာဖွေမှုကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် DIY တွင်ကျွမ်းကျင်မှုအချို့ရှိပါကစမတ်ဖုန်း၏နောက်ဘက်ကင်မရာကိုမည်သည့်နေရာတွင်ထားရမည်ကိုအဖုံးများသို့မဟုတ် gadget များကိုတိုက်ရိုက်ဖန်တီးနိုင်သည်။
စမတ်ဖုန်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုစိတ်ထဲထားရမယ် မိုဘိုင်း sim ကဒ်၏ဒေတာနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့မသုံးနိုင်ပါ။ များစွာသောသူတို့အတွက်ယုတ္တိမရှိဟုထင်ရသော်လည်းကုမ္ပဏီအားလုံးကဤအသုံးပြုမှုကိုအပြစ်ပေးခြင်းနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်မှာကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်၊ သူလျှိုကင်မရာအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်၊ အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးဝန်းကျင်ရှိအသုံးပြုသူများအတွက်ကြီးမားသောပြproblemနာမဟုတ်ပါ။
အနုတ်လက္ခဏာ ဒီစီမံကိန်း၏ ကိရိယာနှင့်နီးသော Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုရှိရန်စီစဉ်ထားသည်စီမံကိန်း၏ဈေးနှုန်းနှင့်ယခင်ဂူဂဲလ်သို့မဟုတ် Apple ဂေဟစနစ်အပေါ်မှီခိုမှုထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
El အပြုသဘောအချက် ဒီပရောဂျက်ရဲ့ကဖြစ်ပါတယ် အချိန်ဖြုန်းလိုသောအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ၎င်းတို့သည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အရာများနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသီးခြားအရာများအတွက်သူလျှိုကင်မရာတစ်ခုသာလိုချင်သည်။
၃။ PiCam ကိုသုံးခြင်း
အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲချစ်သူများအတွင်း၌လည်းမရှိ အလွန်လူကြိုက်များစီမံကိန်း ၏ဖန်တီးမှု၏ Raspberry Pi ဘုတ်နှင့်သူလျှိုကင်မရာတစ်လုံး, တစ် ဦး ထောက်ပံ့ရေးနှင့် the PiCam, GPIO port နှင့်ဆက်သွယ်သော XNUMX% Raspberry Pi နှင့် Raspbian သဟဇာတဖြစ်သောကင်မရာ။ ဤစီမံကိန်းကိုအရန်ဝက်ဘ်ကင်မရာအဖြစ်သာမကစပိုင်ကင်မရာနှင့်စောင့်ကြည့်ကင်မရာကဲ့သို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့သောအောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ် Raspberry Pi ဖောင်ဒေးရှင်းမှကလေးများသည်ငှက်များကိုစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဤစီမံကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းများသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ PiCam ၏ပုံသဏ္meansာန်ကသူလျှိုကင်မရာကိုမည်သည့် gadget တွင်မဆိုထည့်နိုင်သည်။
အ ဤစီမံကိန်း၏ဆိုးကျိုးများသည်ဤသူလျှိုကင်မရာကိုဖန်တီးရန်အတွက်စီမံကိန်း၏စျေးနှုန်းကြီးမြင့်နေခြင်းဖြစ်သည် ပြီးတော့ဒီထောက်လှမ်းရေးကင်မရာကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုမယ်ဆိုတာမြင့်မားတဲ့အသိပညာ။
ဤစီမံကိန်း၏ကောင်းကျိုးများသည် Free Software and Hardware နှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သူလျှိုကင်မရာကိုမည်သည့် site နှင့်အခြေအနေနှင့်မဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။
ပြီးတော့၊ မင်း၊ သူလျှိုကင်မရာဆောက်ဖို့ဘယ်စီမံကိန်းကိုရွေးသလဲ။
ယခုအချိန်တွင်မည်သူသည်မည်သည့်စီမံကိန်းကိုလုပ်ဆောင်ရမည်၊ သို့မဟုတ်မည်သည့်“ အိမ်လုပ်” သူလျှိုကင်မရာတစ်ခုဖန်တီးရန်ရွေးချယ်ရမည်ကိုသင်စဉ်းစားမည်မှာသေချာသည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ငါစီမံကိန်းကို PiCam နှင့်အတူလုပ်ဆောင်ရန်လိုလိမ့်မည်၎င်းသည်မည်သည့်နယ်ပယ်နှင့်မဆိုလုံးဝအခမဲ့ပြီးသဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်သာမကသူလျှိုကင်မရာတစ်လုံးဖန်တီးခြင်းအပြင် Raspberry Pi နှင့် GPIO port တို့၏လည်ပတ်မှုကိုလည်းလေ့လာနိုင်သည်။ အချိန်မရှိရင်စမတ်ဖုန်းကိုရွေးတာအကောင်းဆုံး။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ရွေးချယ်မှုသည်သင်နှင့်သာသက်ဆိုင်ပြီးစီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီကိုကြိုးစားကြိုးစားခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သူလျှိုကင်မရာရှိရန်မည်သူ့ကိုဆုံးဖြတ်ရမည်ကိုကူညီလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Raspberry Pi » အခမဲ့သူလျှိုကင်မရာတည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်း (၃) ခု
ဤစာမျက်နှာတွင်သင်ပေးသောအကြံဥာဏ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် Raspberry Pi အတွက်အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှက်ရွံ့သောကွန်ပျူတာပညာရှင်အနေဖြင့်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကမှဤကြီးမားသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။
HDMI to VGA cable သည် minipc ရှိရန်အလွန်အသုံးဝင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်